Gniap – Personal Blog
ဆရာကိုတာ ရဲ့ ဒီရက်ပိုင်း ထွက်တဲ့ စာအုပ် – တဂိုး ၏ အမျိုးသားရေးဝါဒ စာအုပ် ဝယ်ဖတ်ဖြစ်ပြီး ဒီစာကို ရေးဖြစ်တာ။ စာအုပ်က ပါးပါးလေးပါ ။ နာရီဝက် ၄၅ မိနစ်လောက် အမြန်ဖတ်ရုံနဲ့ ပြီးတယ်။ တွေးစရာတွေ ပြန်တွေးလို့ ရအောင် သေချာတော့ ပြန်ဖတ်မယ် စိတ်ကူးတယ်။ တဂိုးကို သိတာကြာပြီ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝ ထဲကပေါ့လေ ။ သူ့ ကဗျာစာအုပ်တွေ အဟောင်းတန်းက
March 21, 2022	11:33 am
ညဘက် အိပ်မပျော်တာမျိုး ပြန်ဖြစ်နေတယ်။ အထူးသဖြင့် အနာဂါတ်အကြောင်း စဥ်းစားရင်ပေါ့ ။ အခု အချိန်အထိ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပညာရှင် တစ်ယောက်လို့ မခံစားရဘူး ။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ် တစ်ခုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အသုံးမချနိုင်သေးဘူး ။ ရှေ့လျှောက် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ ဒီနိုင်ငံ ရဲ့ အနာဂါတ်ကလဲ ပိတ်ပိတ်ပိန်းအောင် မှောင်နေသလို ကိုယ့်အနာဂါတ်လဲ အဲဒီအတိုင်း ဖြစ်နေသလို ခံစားရတယ်။ နိုင်ငံခြား ထွက် အလုပ်လုပ်ဖို့လဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်
February 20, 2022	7:09 pm
ဒီနေ့ အိမ်သစ် ပြောင်းတယ်။ ငှားနေခဲ့ရတဲ့ အိမ်ဆိုပေမယ့် ၂ နှစ်ကျော်လောက်ဆိုတော့ တိုက်ခန်းအဟောင်းလေးကို သတိရမိသား။ ဒီတိုက်ခန်းထဲမှာ COVID ကပ်ဆိုး ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတာ။ စစ်ခွေးတွေရဲ့ အာဏာသိမ်းတဲ့ အချိန်ကာလ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာ။ လမ်းထဲက လူ များများစားစား မသိပေမယ့် အာဏာသိမ်းပြီး နောက်ပိုင်း လမ်းလုံခြုံရေးအတွက် ညလုံးပေါက် ကင်းစောင့်ရတဲ့ ညတွေကြောင့် တချို့အစ်ကိုတွေနဲ့ သိကျွမ်းခဲ့တယ်။ သံပုံးတွေ ပိန်ချုံ့နေအောင် တီးခဲ့ဖူးတယ်။ လမ်းထိပ်က တန်ဖိုးနည်း အသုပ်ဆိုင်လေးကို
February 6, 2022	3:31 pm
ဇန် ၂၁ ရက်နေ့ – သောကြာနေ့ ။ စိတ်ပျက်ခြင်းတွေ ရှက်ရွံ့ခြင်းတွေ စိတ်ထဲ ပြန်ဝင်လာ ။ Gym လဲ မသွားဖြစ် ။ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ဘယ်လို တိုးတက်ပြောင်းလဲရမလဲ ဆိုတာလဲ မသိတော့ ။ ယုံကြည်မှုလဲ မရှိ ။ ဒီကြားထဲ မအေလိုး မင်းအောင်လှိုင်က ဆိုင်ဘာဥပဒေအသစ် ပြဌာန်းဖို့ အတင်းအကြပ် ကြိုးစားနေကြောင်း သတင်းတွေ ဖတ်ရ။ ကိုဂျင်မီ ၊
January 21, 2022	6:12 pm
အာဏာသိမ်းတာ တစ်နှစ် ပြည့်တော့မယ်။ #FailedCoup လို့ ပြောဆိုနေတဲ့သူတွေ ရှိသလို စစ်ကောင်စီ စစ်ခွေးတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာ ဘဝပျက်ခဲ့ရတဲ့ မိသားစုပေါင်းလဲ သိန်းချီ သောင်းချီ ရှိနေပြီပဲ ။ မြို့ပြတွေပေါ်မှာ ဘာမှ မဖြစ်ချင်ယောင် ဟန်ဆောင်ပြီး ပျော်သလို နေနေကြပေမယ့် ကျေးလက်တောရွာတွေမှာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးက နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဝင်နေပြီ ။ သားဖြစ်သူ ကိုင်ဖို့ တူမီးလက်နက်အတွက် နားကပ်ဖြုတ်ရောင်းပေးတဲ့ လယ်အလုပ်သမ မိခင်တစ်ယောက်အကြောင်း RFA
January 16, 2022	5:33 pm
I was angry every time I lost Chess matches, especially when it was inarow. It had beenaweek I can’t sleep at night , then slept all the daytime. That’s why I
December 29, 2021	11:03 pm